Ofufe Vision gam akporo Mbadamba | Site na Linux
The ika ofufe Ngwongwo ohuru nke gam akporo asaa nke ohuru juru ndi ahia anya, nke ha kporo Fly ọhụụ. Mbadamba ohuru a gunyere ihe eji etinye ya, nke na-enye ohere inweta ngwa di iche, dika: onye na-agu akwukwo na elektrọnik, ozi ngwa ngwa, ihe ntaneti vidiyo, na netwọkụ mmekọrịta, tinyere ndị ọzọ.
Otu n'ime njirimara ndị bụ isi nke Ofufe Vision gam akporo Mbadamba, anyị na-ahụ ihe nhazi 2818 MHz Rockchip 600, ihuenyo 7-inch jikọtara 256 MB nke RAM, nchekwa 4GB, Wi-Fi, ọkà okwu 3,5 mm na isi okwu isi, kaadị microSD (ruo 16GB), na batrị 4000 mAh. Mbadamba nkume a ga-efu $ 215. Ọ ga-adị na oji na ọcha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » ọtụtụ » Ofufe Vision gam akporo Mbadamba
Termkit: ochie ọnụ reinvented